4 Strategies ka Mbibi ihe ize ndụ nke Rampant Pịa wayo | Martech Zone
Mgbasa ozi Dijitalụ ga-abụrịrị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị elu na 2016 dịka ComScore. Nke ahụ na-emekwa ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha maka igwu wayo. N'ezie, dị ka akụkọ ọhụrụ gbasara aghụghọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmefu mgbasa ozi niile ga-ala n'iyi na aghụghọ.
Mgbasa Neti na Bureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịta (IAB) weputara A Digital Publisher Guide to Nyocha na Mitigating Bot Okporo ụzọ, a akụkọ na-enyocha taa digital ad wayo nsogbu.
Key Pịa Wayo Nchoputa
75% nke ndị nkwusa na 59% ndị mgbasa ozi enweghị ike ịkọwapụta mmadụ na ọgụ na-abụghị nke mmadụ.
Ejiri nchịkọta (50%) na nduhie wayo na ndebanye aha adịgboroja (32%) bụkwa nsogbu dị mkpa na-abụghị nke mmadụ na ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị mgbasa ozi.
Pịa na echiche wayo bụ nchegbu kachasị maka ma ndị mbipụta akwụkwọ (86%) na ndị mgbasa ozi (100%) mgbe ọ bịara n'okwu okporo ụzọ weebụ.
Akụkọ ahụ dị omimi ma na-agagharị ndị nkwusa na ndị mgbasa ozi site na otu ịpị aghụghọ si arụ ọrụ yana atụmatụ iji belata ihe egwu ahụ, gụnyere:
Performance - Elekwasị anya obere na raw nọmba na ndị ọzọ na-ahụ anya omume. Tinye ihe mkpali arụmọrụ maka ụlọ ọrụ gị iji hụ na nsonaazụ azụmaahịa dị mma.
Eleghara Echiche - Ngosipụta na-adị mfe site na bot na ndị ọzọ na-abụghị mmadụ.
Quality - Mmefu ego maka ogo, obughi otutu. Wepụ ego na ọdụ ogologo-ọdụ na mgbanwe mgbasa ozi, ebe aghụghọ dịkarịsịrị ma zụta ngwaahịa na isi saịtị.
Chọọ Ngosipụta - Ọ bụrụ na ndị nnọchi anya gị ma ọ bụ ndị na-eweta ngwa ahịa enweghị ike igosi gị ebe mgbasa ozi ọ bụla
echiche e jere ozi, ejila ha.
Budata ntuziaka nke onye nkwusa dijitalụ na ntụgharị na mitigating bot okporo ụzọ
Tags: mgbasa ozi wayoAssociationlọ Ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke AmericaAnaAssociation nke Ndị Mgbasa Ozi Mbapịa wayoMgbasa NetiIABBureaulọ Ọrụ Mgbasa Ozi mmekọrịtaokporo ụzọ na-abụghị nke mmadụn'ihe ize ndụmkpadontụkwasị obi aza ajụjụ otu
Typography Terminology: Apex ka Swash na Gadzook N'etiti
Ọkt 29, 2015 na 7:25 PM
Ndewo Douglas- edemede ahụ kpuchiri isiokwu nke ịpị aghụghọ, ma ọ naghị enye ezigbo azịza, ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ị ga-enweta ọnụọgụ bọtịnụ. Otu echiche ga-abụ ịkpachara anya na ntọala metụtara ịchọta geo (dị ka ndị dị n'okpuru + Advanced nhọrọ). Ọzọkwa, n'iji ngwanrọ raara onwe ya nye, dị ka http://www.xionagrup.ro ga-abụ nnukwu ideea, ma ọ bụ ọbụlagodi iji parsers log iji hụ ihe IP ma ọ bụ klaasị na ịpị na mgbasa ozi gị.